BackGround History » Technological University (Hpa-an)
Technological University (Hpa-an)’s History
Government Technical High School (Hpa-an) had been started to established on 6th September 1993 beside the (Hpa-an-Donyin) road in field No.(1185). It had been transformed as Government Technological Institute from 12th August 1998 and then it had been upgraded as Government Technological Collage on 28th December 2000. From the board of Education Committee of Government of Union of Myanmar promoted the college to be university level as Technological University (Hpa-an) from the date of 20th January 2007. Dr. Myo Min Zaw, Ph.D (Mech), Professor, serves temporarily asaprincipal of this institution.
အစိုးရ စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း (ဘားအံ)အား ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင် ဘားအံ−ဒုံရင်းကားလမ်းဘေး ကွင်းအမှတ်(၁၁၈၅)တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့ မှစ၍ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၈)ရက်တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့မှ တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(ဘားအံ)အဖြစ်သို့ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ ပါသည်။ ယခု ခေတ္တ ကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ် ဒေါက်တာမျိုးမင်းဇော် Ph.D(Mech) မှ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။
Technological University (Hpa-an) is located on field No.(1185), near Ye Thar Village , Hpa-an Donyin road, Hpa-an Township, Kayin State. It is 35.19 area wide.
နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(ဘားအံ)သည် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဘားအံမြို့နယ်အတွင်း ရဲသာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘားအံ− ဒုံရင်းကားလမ်းဘေး ကွင်းအမှတ် (၁၁၈၅) တွင်တည်ရှိပါသည်။ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (ဘားအံ)၏ အကျယ်အ၀န်းမှာ (၃၅.၁၉) ဧက ရှိပါသည်။
Copyright © 2016 Technological University (Hpa-an). All Rights Reserved.